မုံရွာ ဆန္ဒပြသူများ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရ၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ – OK Media
မုံရွာ ဆန္ဒပြသူများ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရ၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ
February 22, 2022 Ok MediaLeaveaComment on မုံရွာ ဆန္ဒပြသူများ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရ၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျ
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့တွင် ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂) နံနက်ပိုင်း “နှစ်ခြောက်လုံး စည်ကားသပိတ်” တွင် ပါဝင်သူတို့ကို စစ်ကောင်စီက ကားဖြင့်တိုက် ဖြိုခွင်းရာ ထွက်ပြေးသည့် ဆန္ဒပြသူအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခဲ့ပြီး လူငယ် ၅ ဦး ဖမ်းဆီးခံရသည်။
နံနက် ၆ နာရီကျော်၌ မုံရွာမြို့၊ သလ္လာရပ်ကွက် ပေ ၈၀ လမ်းပေါ်တွင် အသက် ၂၀ အရွယ် ဆိုင်ကယ်စီး အမျိုးသမီးနှစ်ဦး စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး နှိုးဆော်စာများ၊ နှင်းဆီပန်းများ ဖြန့်ကြဲနေစဉ် အရပ်ဝတ် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ထိုသို့ ဖြိုခွင်းခဲ့သည်ဟု မုံရွာလူထုသပိတ်တိုက်ပွဲ ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ကိုအာကာက ပြောသည်။
“အိမ်စီးကားက ဆိုင်ကယ်ကို ဒရွတ်တိုက်ဆွဲတယ်။ ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာ လိုက်ဖမ်းတဲ့ကားက ပျက်သွားတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆိုင်ကယ်က လဲသွားတယ်။ ရှေ့က တစ်ယောက်က ဆိုင်ကယ်မောင်းပြေးသွားတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း ခြေဦးတည့်ရာပြေးတာ”ဟု ၎င်းက ကြုံတွေ့ရပုံကို ပြောသည်။
ကျန်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးငယ်မှာ ကိုယ်ဝန် ၂ လ ရှိသည်ဟု သိရကြောင်း၊ ပုန်းခိုခွင့်ပြုရန် သလ္လာရပ်ကွက်အတွင်း အကူအညီတောင်းခံစဉ် မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရသလို လမ်းပေါ်သွားလာနေသည့် ဆိုင်ကယ်ကို စီးနင်းခွင့်ပြုရန် အကူအညီတောင်းခံစဉ် တွန်းချခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရကြောင်း သူက ပြောသည်။
“ကောင်မလေးက လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို တားပြီး အကူညီတောင်းတယ်တဲ့။ နောက်ကနေ (ဆိုင်ကယ်ပေါ်) တက်နေတဲ့အချိန်မှာ သူ့လက်ထဲမှာ နှင်းဆီပန်းတွေ ကိုင်ထားလို့ မလိုက်ခဲ့နဲ့ သွားဆိုပြီး ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ တွန်းချတယ်တဲ့။ အဲဒါဖြစ်ပြီးတော့ သွေးခဲတွေကျလာတယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု ကိုအာကာက ဆိုသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့၏ ကားမှာ ဆိုင်ကယ်ကို တိုက်ပြီးနောက် ပျက်သွားသဖြင့် ရပ်တန့်ထားကြောင်း၊ ထိုအမျိုးသမီးငယ်မှာ ဒဏ်ရာနှင့်ပင် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြောင်း မုံရွာသပိတ်ကော်တီဝင်ထံမှ သိရသည်။
မုံရွာမြို့နယ်အခြေစိုက် ပရဟိတသမားတစ်ဦးကလည်း အလားတူ ပြောကြားသည်။
“စစ်ကောင်စီက ကားနဲ့ လိုက်တိုက်တော့ ကိုယ်ဝန်သည်အမျိုးသမီးက လမ်းပေါ်မှာ မောင်းနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို အကူညီတောင်းတာ။ (ဆိုင်ကယ်) အပေါ် တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ မတက်နဲ့ဆိုပြီး တွန်းပစ်လိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်တွေ မတက်နဲ့လို့ ပြောတယ်တဲ့။ အဲဒီချိန်မှာ လဲကျသွားပြီး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသွားတာလို့ ပြောတယ်”ဟု အထက်ပါ ပရဟိတသမားတစ်ဦးက ဆက်ပြောသည်။
ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ထွက်ပြေးရသည့် အမျိုးသမီးငယ်လည်း ပုန်းခိုရန် အကူညီတောင်းခံမှု ငြင်းဆန်ခံခဲ့ရသည် ဆိုသည်။
“ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့ ကလေးမလေးက ပြေးနေရင်းနဲ့ ရပ်ကွက်ကို အကူညီတောင်းတယ်။ တံမြက်စည်းလှည်းနေတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်ကို ခဏ ဝှက်ပေးထားဖို့၊ အလုပ်မရှုပ်နဲ့ သွားဆိုပြီး မောင်းထုတ်တယ်တဲ့” ဟု ထိုအမျိုးသားက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါအမျိုးသမီးငယ်မှာလည်း စစ်ကောင်စီတပ်က ဖမ်းဆီးရန် ကြိုးပမ်းစဉ် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများ ရရှိထားသည်ဟု သိရသည်။​
ထိုအမျိုးသမီးနှစ်ဦး၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး Myanmar Now က ဆက်လက် စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
စည်ကားသပိတ်ကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ ဆင်နွှဲလျက်ရှိရာ မုံရွာမြို့ရှိ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်သည့် လူငယ်များ လူခွဲ၍ ပြောက်ကျားဆန္ဒပြမှုများ ယနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ဖြိုခွင်းခံရပြီး ထိုသို့ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မုံရွာလူထုသပိတ်တိုက်ပွဲ ဦးဆောင်ကော်မတီထံမှ သိရသည်။
တော်လှန်ရေးအင်အားစုများက ယနေ့တွင် ၂ ခြောက်လုံးအထိမ်းအမှတ် စည်ကားသပိတ်အဖြစ် တစ်နိုင်ငံလုံး ပါဝင်ရန် နှိုးဆော်ထားပြီး သနပ်ခါးလိမ်းခြင်း၊ ပန်းပန်ခြင်း၊ ခမောက်/ဦးထုပ် ဆောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်၍ လမ်းပေါ်ထွက်ရန် နှိုးဆော်ထားကြသည်။
နံနက် ၇ နာရီဝန်းကျင်၌ မုံရွာမြို့၊ အင်းရွာသစ်ရပ်ကွက်တွင် ဆန္ဒပြရန် လူစုနေသည်ဟု ယူဆရသော အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ် အမျိုးသားနှစ်ဦးကို စစ်ကောင်စီတပ်က ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရာ တစ်ဦးမှာ ပေါင်တွင် ကျည်ဆန်ထိမှန်ခဲ့သည်။
“ပထမ ဝင်ပစ်တယ်၊ ၃ ချက်။ ပေါင်ထိသွားတယ်တဲ့။ ပေါင်ထိလို့ လဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာ မျက်နှာကို ဖိနပ်နဲ့ နင်းထားတယ်တဲ့။… သူတို့ ဆန္ဒမပြရသေးဘူး။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ ဝင်တုန်း အဖမ်းခံရတာ” ဟု မျက်မြင်တွေ့ရှိလိုက်ရသူတစ်ဦးကို ကိုးကား၍ ကော်မတီဝင် ကိုအာကာက ပြောသည်။
“အဝင်ဝမှာပဲ အောက်ပိုင်းကို ၃ ချက် ပစ်သွားတယ်။ ပစ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့လည်မျိုကို နင်းထားတယ်တဲ့။ သူ့အဖော်လည်း ပါသွားတယ်”
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် ရန်ကင်းရပ်ကွက်၌ အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၊ ၁၀ နာရီခန့်တွင် အောင်သပြေလမ်း၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာလမ်းအနီး သနပ်ခါးလိမ်းထားသည့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း မုံရွာလူထုသပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီထံမှ သိရသည်။
“နှစ်ခြောက်လုံးနေ့မှာ သူတို့က မနက်လင်းအားကြီး ၄ နာရီလောက်ထဲက ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန်ဆန္ဒပြတဲ့ နေရာတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ထွက်လာမယ်အထင်နဲ့ ကင်းပုန်းတွေ အကုန်ချထားတယ်” ဟု ကိုအာကာက မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပြောသည်။
“မြို့လယ်ကောင်တွေမှာ ကင်းပုန်းတွေရှိတယ်။ အခုက တော်တော်များများပိတ်စစ်နေတယ်။ ရတနာပုံ၊ အောင်သစ္စာလမ်းတွေမှာ ကင်းတွေ အများအပြားနဲ့ လှည့်နေတယ်”
လက်ရှိတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များက မုံရွာမြို့ပေါ် လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားကြောင်း သိရသည်။
မတ္တရာမှ ဒလန် အသတ်ခံရသည့် နေရာသို့ သွားသော စစ်ကား ၂ စီး မိုင်းဆွဲခံရ
တန်ပြန်ထိုးစစ် ရှိသမျှအင်အားနဲ့ လုံးတော့မယ် လို့ ပြောလိုက်တယ့် ဗိုလ်နဂါး…. ပြောသွားတာလေးနားထောင်ကြည့်…
မြစ်ငယ်မှာ စစ်တပ်က လက်နက်နဲခြိမ်းခြောက်လို့ ပြည်သူ ၈၀,၀၀၀ ကျော် အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေရ….
အာဏာရွင္ ပူတင္၏လက္ကုိင္ဒုတ္မ်ား ယူကရိန္းျပည္သူတုိ့၏ ပစၥည္းမ်ားအား ခုိးယူ(ရုပ္သံ)